असफल भईरहनुहुन्छ ? सफलता ‘१० सुत्रहरु’ जान्नुहोस् -
मनास्लु पाेष्ट ८ माघ २०७७, बिहीबार १९:१६ 244 पटक हेरिएको
काठमाडौं – अधिकांश मानिसहरु आफ्नो सबै समय,उमेर, उर्जा, लगानी खर्चिँदा पनि सफल हुँदैनन् । तर केहि मानिस निश्चित समय कडा परिश्रम गरेपछि सुखी, खुशी र सफल हुन्छन् ।
यो प्रश्नको सरल जवाफ छ – ‘उनीहरु कुनै टेक्निकले’ काम गर्दछन् ।
लक्ष्य निर्धारण : आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुहोस् र सधै त्यसमा कठिबद्ध भएर लाग्नुहोस् । बाधा अड्चनले तपाईलाई हललाउनै नसकोस् त्यसरी दृढ बन्नुहोस् ।यो कुरा बुझ्नुहोस् कि ”लक्ष्य भनेको मिती सहितको सपना हो।”
आफैँलाई जित्नु : डर/ त्रास /भयमा नअल्मलिनुहोस्, यसलाई जितेर अघि बढ्नुहोस् ।आफूलाई जित्नुभयो भने संसार जित्नसक्नुहुन्छ ।
वातावरण कस्तो छ ? : खराब आनीबानी, वातावरण र साथीसंगतबाट टाढा बस्नुहोस् ।
मितव्ययीता : आफूसँग भएको पैसा सम्पत्ति असल कर्मको लागि खर्चनुहोस् । र सधै सही ठाउँमा मात्र प्रयोग